Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, आज कारोबार कतिमा हुँदैछ ? - Pnpkhabar.com
सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट, आज कारोबार कतिमा हुँदैछ ?
काठमाडौं, १९ असोज : सोमबार सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार तोलामा ९४ हजार ५०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापवाल सुन सोमबार ४ सय रुपैया घटेर तोलामा ९४ हजार १०० रुपैयाँमा कारोबा भएको हो ।
यस्तै तेजावी सुन तोलामा ९३ हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यस्तै सोमबार चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ । आइतबार तोलामा ११८० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य सोमबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको हो ।